Su'aal: Maxaa ugu muhiimsan oo u qaadan karaa cudurka Hepatitis B?
Author Topic: Su'aal: Maxaa ugu muhiimsan oo u qaadan karaa cudurka Hepatitis B? (Read 4147 times)
« on: July 31, 2011, 12:15:27 PM »
waad salaamantihiin dhamaantiin dhaqaatiirta sida hagarlaanta ah
ugu taba rucaya walaalohooda soomaaliyeed waxaan qabaa su aal taa oo ah
beer xanuun oo ah qabta hepats (b) waxaa kicinaya subaga baruurta dufanka
maxaa ugu mihiimsan oo aan u qaadan karaa dawo mase jirtaa dawo lagu guuriyo
ama lagu tirtiro
waad mahad santihiin
Re: Su'aal: Maxaa ugu muhiimsan oo u qaadan karaa cudurka Hepatitis B?
« Reply #1 on: August 08, 2011, 08:09:33 PM »
Cudurka Cagaarshowga hadduu cusub yahay badanaa wax daawo ah uma baahna maadaama uu calamadihiisa ay iska baab'aan markii laga reebo dad yar oo loo qoro daawooyin waa haddii ay ka soo muuqdaan calaamado daran oo ka baxsan calaamadihii lagu yaqaannay cudurka sida matagga, bog xanuunka, cunno xumida iyo miisaanka oo dhaca.
Inkastoo aysan jirin daawo cudurkaan lagu daaweeyo laakiin waxaa jiro dhowr daawo oo loo qoro dadka cudurka uu ku raagay, daawooyinkaas oo howshoodu tahay in taranka fayraska ay yareeyaan si looga badbaadiyo in beerkoodu uu dhaawac gaaro kadibna uu hawlgab ku dhaco.
Daawooyinkaan waxay leeyihiin waxyeello badan oo takhtar la'aan lama qaato.
BARO CUDURKA CAGAARSHOWGA B (HEPATITIS B): http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,633.0.html
Views: 8144 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 89501 August 23, 2015, 02:14:13 PM
Views: 52312 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 17830 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 18725 April 06, 2016, 04:35:38 PM